Oromada Oo Laysay 60 Ruux Oo Soomaali Ah Oo Ay Maxaabiis Ahaan U Hayeen Iyo Colaadii Labada Dhinac Oo Mar Kale Soo Noqotay |
Oromada Oo Laysay 60 Ruux Oo Soomaali Ah Oo Ay Maxaabiis Ahaan U Hayeen Iyo Colaadii Labada Dhinac Oo Mar Kale Soo Noqotay
Dawlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku eedeysay ismaamulka Oromiya dhimashada ugu yaraan 60 qof oo ay sheegeen inay ahaayeen dad maxaabiis ah.
Madaxa xafiiska arrimaha dawlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya, Idiris Ismaaciil ayaa BBC u sheegay in dadkaas markii la laayeen ka dib lagu riday meel god ah.
Inkastoo aanay eedeyntaas xaqiijin ismaamulka Oromiya, ayey haddana dad goobjoogeyaal ah sheegayaan in tiradu ay intaas ka badan tahay. Waxaa kale oo aan jirin ilo madax banaan oo xaqiijinaya eedeynta.
Mid ka mid ah dadka ka qaxay degmada Daaro Labbo ee Gobolka Jiro oo ka tirsan deegaanka Baali oo ah halka ay dhibaatada ka dhacday ayaa BBC u sheegay in dadka la laayey ay ahaayeen dad boolisku isugu keenay xero askareed si aanay waxyeello u soo gaadhin oo loo badbaadiyo.
Qofkaas oo ah nin codsaday inaan magaciisa la sheegin sababo amni dartood wuxuu sheegay in uu ka baxsaday dilka oo uu isaga iyo laba ilmood oo uu dhalay ay joogaan meel buur ah, halka xaaskiisa iyo afar caruur ahna aanu war ka hayn meel ay ku dambeeyaan. Wuxuu intaas ku daray inay jiraan guryo la gubay.
Madaxa Jaaliyadda Oromada ee Canada oo BBC la soo xidhiidhay ayaa isna sheegay in ay dad ku dhinteen halkaas, hase yeeshee si kale ayuu arrinta u dhigay.
Wuxuu sheegay in, sida ay maqleen iyagu, ciidanka Liyuu Booliska ay rasaas ku fureen dad Oromo ah oo ay dileen 33 qof, ka dibna nin uu walaalkii ka mid ahaa dadkii la dilay oo cadhaysan uu isna rasaas ku furay dad Soomaali ah.
Wuxuu intaa ku daray in aanay fiicnayn in aargoosi la isu laayo, wuxuuna labada dhinac ka codsaday in ay dhibaatada ku xalliyaan qaab dhaqanka waafaqsan.
Weli xukuumadda federaalka ee Itoobiya iyo ismaamulka Oromiya midkoodna kama uu hadlin dhibaatadan.